Toy izao no fijerin'ny volana sy ny tany avy any Mars | Vaovao momba ny gadget
Tahaka izany ny endrin'ny Moon sy ny Tany avy any Mars
Betsaka ny iraka izay ezahana anio hamotopotorana fatratra araka izay azo atao ny Mars mba hanomanana ny olona amin'ny mety hahatongavany. Anisan'izy ireo anio no mila miresaka momba ny Mars Reconnaissance Orbiter na manokana kokoa ny iray amin'ireo zavamanenony, ilay vita batemy ho Fanandramana avo lenta momba ny siansa, iray fakan-tsary avo lenta izay niandraikitra, tao anatin'ny iray amin'ireo fihodinana natao tamin'ny planeta mpifanila vodirindrina aminy, haka ny sary azonao jerena eo am-piandohan'ny fidirana misitatra.
Ity sary ahafahanao mahita ny tany sy ny Volana ity dia toa nosamborin'ilay fitsapana taloha Novambra 20 avy amin'ny 2016, dia notanterahina tamin'ny tanjona tokana hanamafisana ny angona angonin'ny fanadihadiana. Amin'ity karazana rehetra ity, avy amin'ny NASA dia niasa izy ireo mba hanolotra sary iray manana faharetana mafy kokoa noho izany, araka ny nolazain'izy ireo, amin'ny sary tany am-boalohany, ohatra, ny volana dia maizina kokoa noho izy. Ianao afaka jerena amin'ny sary.
Na eo aza izany, amin'ny sary dia mbola manohy mitazona ny halavirana ny tany sy ny volana araka ny hita avy amin'ilay zavamaniry mena, elanelana izay, raha ny filazan'ny NASA, dia mitovy amin'ny telopolo heny ny savaivon'ny planetantsika na eo aza ny sary , toa kely kokoa izany elanelana izany. Teboka iray hafa tokony hodinihina, hoy ny mpahay siansa, fa tamin'ny fotoana nakana ny sary dia lavitra an'i Mars ny Tany 205 tapitrisa kilometatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Tahaka izany ny endrin'ny Moon sy ny Tany avy any Mars
Tamin'ny andro toy ny androany 10 taona lasa izay dia natolotra ny iPhone voalohany teo amin'ny tantara
Nandritra ny alin'ny Taom-baovao dia 63.000 tapitrisa ny hafatra WhatsApp nalefa